एनआरएनए स्पेनको नयाँ नेतृत्वमा राई र डुम्रे भिड्दै | सुदुरपश्चिम खबर
२६ असार, बार्सिलोना । एनआरएनए स्पेनको नयाँ नेतृत्वको लागि उत्तरकुमार राई र शालिकराम डुम्रे चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि राई र डुम्रेले बुधबार बार्सिलोनामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको हो।
म्याड्रिड निवासी राई संघको वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन् भने बार्सिलोना निवासी डुम्रे कार्यसमितिका सदस्य हुन् । आगामी जुलाई २५ मा हुने एनआरएनए स्पेनको सातौँ अधिवेशनमा लागि विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ।
यस्तै दुई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य (आईसीसी) पदका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दिनेश कुमार गिरी, प्रकाश तिमिल्सिना र यज्ञ नारायण पौडेलले (रमेश) उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। गिरी वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन्। यसअघि उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताउदै आएका थिए। तिमिल्सिना छैटौँ अधिवेशनमा पनि आईसीसीका प्रत्यासी थिए। यस्तै पौडेल वर्तमान कार्यसमितिकै सल्लाहकार हुन्। दुई हजारभन्दा बढी पंजीकृत सदस्य भएकाले एनआरएनए स्पेनमा दुईजना आईसीसी सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
अन्य कुन – कुन पदमा कसले दिए उम्मेदवारी ?
यस्तै खुल्ला उपाध्यक्ष तर्फको दुई पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कृष्णराम रानाभाट, भुप्रेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र सोनु राउतबीच खुल्ला उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। महिला उपाध्यक्षमा कमला बराल र सृजना लामिछाने, क्षेत्रगत उपाध्यक्षमा रोशन पाठक र महेश्वर घिमिरे (भान्जा) चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
महासचिवमा बिदुर गौतम र ध्रुव भट्ट र दुई सचिव(खुल्ला तर्फ) अरुण घिमिरे, केविन्द्र शाही (के.बी.) र नारायण भट्टराई (एन.के) बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुनेभएको छ। कोषाध्यक्षमा सन्त बहादुर क्षेत्री र शिवप्रसाद गौतम, युवा संयोजकमा दिपेन्द्र गजुरेल र मनुश जंग खड्काबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
सहकोषाध्यक्षमा शिवप्रसाद पौडेल, महिला संयोजकमा देवीकुमारी भण्डारी, क्षेत्रगत सचिवमा पाइसभास्कोबाट दिपेन्द्र प्रकाश अर्याल, ग्रान कानरियाबाट दिपेन्द्र श्रेष्ठको मात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन्। तर म्याड्रिड क्षेत्रबाट सचिवमा सुन्दरी लामा र सनिषा गुरुङ चुनावी मैदानमा छन्। कोष्ट़ाब्याङ्का क्षेत्रबाट सचिव पद पछि मनोनित गरिने संघको निर्वाचन नियामवलीमा उल्लेख छ।
५ खुल्ला सदस्यका लागि ७ जना भिड्दै
एनआरएन स्पेनको ५ जना खुल्ला सदस्य पदका लागि ७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सदस्यमा इमा सापकोटा भट्ट,कमल पराजुली,जमुना देवी शर्मा, जितबहादुर माल (कुमाल), दीपक परियार,प्रकाश पुरी र डिल बहादुर थापा रहेका छन्। खुल्लातर्फबाट ५ जना, प्रत्येक क्षेत्रीय समितिबाट एक-एक गरी ४ जना र मनोनित सदस्य ४ जनासँगै १३ जना सदस्यहरु रहने संघको निर्वाचन नियामवलीमा उल्लेख गरिएको छ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन जुलाई १२ मा र निर्वाचन जुलाई २६ मा तोकिएको छ।संघले विद्युतीय मतदान गराउने बताउँदै आए पनि मतदान प्रणाली र नतिजा प्रकाशनबारेको ठोस जानकारीसहितको विवरण निर्वाचन समितिले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
एनआरएनए स्पेनमा २ हजार २० जना पंजीकृत सदस्यहरु रहेका छन् । यिनै सदस्यहरुले संघको नयाँ नेतृत्व चुन्नेछन्। अनलाइन खबरबाट सभार
ढाड दुख्ने समस्याबाट छुटकारा दिने घरेलु उपायहरु !!
प्याजले निम्त्याउँछ यस्ता समस्याहरु !!